सिंगटी हाइड्रोको १ करोड ४५ लाख कित्ता शेयर सूचीकृत, दोस्रो बजारमा बुधवारदेखि कारोबार शुरु
वैशाख १४, काठमाडौं । सिंगटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेडको शेयर मंगलवार धितोपत्र दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएको छ ।
कम्पनीले संस्थापकतर्फको १ करोड १ लाख ५० हजार कित्ता, उद्योग प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाहरुका लागि १४ लाख ५० हजार कित्ता र सर्वसाधारण तर्फको २९ लाख कित्ता गरी कुल १ करोड ४५ लाख कित्ता शेयर सूचीकृत गराएको हो ।
बुधवारदेखि कम्पनीको शेयर कारोबार शुरु हुनेछ । नेप्सेले कम्पनीको शेयरको पहिलो कारोबारका लागि प्रतिकित्ता रू. १०० देखि रू. ३०० सम्मको मूल्य रेञ्ज तोकेको छ । नेप्सेले कम्पनीको वास्तविक प्रतिशेयर नेटवर्थदेखि त्यसको तीन गुणासम्मको मूल्य पहिलो कारोबारका लागि तोकेको हो ।
पहिलो कारोबार दिन प्रि - ओपनिङ सेसनमा कारोबारका लागि म्याच भएको मूल्यको आधारमा नियमित सेसनको लागि खुला मूल्य तय हुनेछ । कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. १०० रहेको छ ।
स्थानिय र सर्वसाधारणलाई आईपीओ बाँडफाँट पश्चात कम्पनीको चुक्तापूँजी रू. १ अर्ब ४५ करोड पुगेको छ । कम्पनीमा संस्थापकतर्फ ७० प्रतिशत, आयोजना प्रभावित स्थानियमा १० प्रतिशत र कर्मचारी सहित आम सर्वसाधारणतर्फ २० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ ।